Viber ကဲ့သို့ ဖုန်း Free ခေါ်တဲ့ Aire Talk | အိမ့်မှူးသော်
Viber ကိုတော့ မြန်မာတွေ တော်တော်များများ သိကြပါတယ်။ Wifi Connection ရရင် Free SMS နဲ့ Free Voice Call တွေရတဲ့အတွက် ဖုံးဖိုးချွေတာလိုတဲ့ သူတွေအဖို့ အများကြီး အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်လည်း Viber ကို တော်တော်များများ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ဖုံးပြောတာနဲ့ SMS အပြင် Viber က တခြား Feature တွေမပါတဲ့အတွက် အပြည့်စုံဆုံး App တစ်ခုတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Aire Talk: Free All in One Communication App
အခုပြောပြမဲ့ App ကတော့ Viber ကဲ့သို့ Free Phone Call/Free SMS အပြင် Free Video Call, Walkie Talkie, Image Sharing, File Transfer အပြင် မိမိရောက်နေတဲ့ Location ကိုပါ သူငယ်ချင်းတွေအချင်းချင်း အပြန်အလှန် ပေးပို့ဆက်သွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Feature တွေပိုမို စုံလင်တဲ့အပြင် Adv Free လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြော်ငြာတွေ မတွေ့ရပါဘူး။
Register Accout နဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်သလို Facebook Account နဲ့လည်း ဆက်သွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Android ဖုံးတွေအပြင် iOS Devices တွေမှာလည်း အသုံးပြုလို့ရတာကို တွေ့ရပါတယ်။
App ကတော့ Aire Talk လို့ခေါ်ပါတယ်။
Aire App ကို သွင်းထားတဲ့ Mobile ဖုံးအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ပြောဆို ဝေမျှနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Aire က ထွက်တာ သိပ်မကြာသေးတဲ့အတွက် မိမိမှာ ရှိတဲ့ Friend တွေ သုံးထားချင်မှ သုံးထားပါလိမ့်မယ်။ အကယ်လို့ မိမိအသုံးပြုရတာ လွယ်ကူရင် Invite လုပ်ပြီး အသုံးပြုကြဖို့တော့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ဦး နှစ်ဘက် App ကို သွင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့
၁. ဖုံးပြောလို့ရပါမယ်။ Voice/Video
၂. SMS ပို့လို့ရပါမယ်။
၃. Walki Talki လိုမျိုး ပြောလို့ရပါမယ်။
၄.Voice Message ပို့လို့ရပါမယ်။
၅. Photo တွေ ပို့လို့ရပါမယ်။
၆. File တွေ ပို့လို့ရပါမယ်။
၇. Location ကို Share လို့ရပါမယ်။
Internet Bandwidth အများကြီး မကောင်းရင်တောင် အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
Android အတွက် Direct Download Link
iOS အတွက် iTunes Link
Tine Htet Aung: TSJ Tech Team
source: TechSpace Journal
Zaw Zawzaw 12:58 PM
အခုလို မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အစ်ကို
aire talk ကို sign in ဘယ်လိုဝင်ရမလဲသိချင်ပါတယ်
facebook နဲ့ဝင်တော့လည်း မရဘုးဖြစ်နေပါတယ်
မြတ်သူ ကိုမြတ် 5:27 PM
အကို ညီလည်း zawzawလို ပဲ ဖုန်းနံပါတ်မှားနေတယ် ဆိုပြီးပြနေတယ် Facebookနဲ့လည်းမရဘူးဖြစ်နေတယ် အကိုကူညီပါအုံး...email..myatthu122@gmail.com
min mahar 8:51 PM
my weblog: www.k1100rs.de
Feel free to visit my web blog: seo india
Pyo Tolt Mg 9:02 AM
Manhappy Chit 8:16 AM
ကျနော်လည်း သုံးလို့ မရလို့ ကူညီ ပေးကြပါအုံး
minnkhant 6:57 AM
Burma King 11:19 AM
We love airetalk, see their latest video
Burma King 11:29 AM
Airetalk is the best , much better than others !